Nampaneno lakolosy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mgr Benjamin Ramaroson filoha lefitry ny FEM (Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara) no namaky ny Taratasin’ny Eveka ny 17 novambra 2013. “Tsy hoe manararaotra an’izao fihaonana izao fa tena ao amin’ny fotoana hanaovana azy mihitsy” hoy izy teo ampanombohana ny famakiany ny Taratasin’ny Eveka.
“Teraka ihany Ambatobevohoka” hoy ireo ela niandrasana. “Izay maharitra…” ary notohizany hoe “…manana ny soa” hoy ireo tsy nahatsiaro ho sasa-niandry.
Nivoaka ihany tokoa ny Taratasin’ny Eveka eto Madagasikara. Novakiana nandritra ny lamesa lehibe natao tao amin’ny kianjan’ny sekoly Masina Misely Amparibe Antananarivo izany ny alahady 17 novambra 2013 teo.
Tsy nialohavan’ny diabe ambavaka (procession) tahaka ny mahazatra fahiny rehefa lamesa lehibe ao amin’ny kianjan’i St Michel. Fahiny izany. Tsy mbola nisy olana tamin’izany fahiny izany rehefa misy olona maro no mivorivory andalambe. Samy tonga amin’ny fotoana tiany ny kristianina tsirairay. Tsapa ihany koa fa tsy nifamotoana ireo paroasy isanisany na solontenan’ny diosezy ihany koa fa tao vao nifampitady. Ela vao feno ny kianja.
Antony roa lehibe no nentina ambavaka nandritra izao Sorona Masina notontosaina ny alahady 17 novambra 2013 teo. Teo ny famaranana ny Taonan’ny finoana ary teo koa ny fanamarihana ny faha-75 taona nandikana ho amin’ny fiteny malagasy ny baiboly katolika. Tena resa-pinoana izany fa tsy resaka politika. Na izany aza dia tany amin’ny mpanao politika tonga nanatrika no niantefan’ny sain’ny mpikaro-baovao tonga tao. Nanamafy izany koa ny namakian’ny mpikarakara ny fotoam-pivavahana ny taratasy fialan-tsiny avy amin’ny filohan’ny Tetezamita izay tsy afaka nanatrika ilay fotoam-pivavahana. Fa raha teo ve izy dia mbola ho nomena fitenana koa ? Tsy fotoam-pivavahana natao ho an’ny firenena na ho an’ny mpanao politika ange iny fotoam-pivavahana iny e ! Moa tsy efa ampy tokoa ve ny fotoana fampielezan-kevitra ankehitriny ? Manaitra hatrany ny toa izao. Tsara raha avahana ny fotoam-pivavahana karakarain’ny Fiangonana sy ny famoriam-bahoaka ataon’ny mpanao politika na koa mpitondra fanjakana. Mbola ezaka goavana io fanovana fahazarana io ka rehefa vavaka dia vavaka fa aleo ny mpanao politika hanokana fotoana ho azy handraisany fitenenana.
Solontenan’ny diosezy samihafa no nanao soradihy nandravaka ny hira “Misaotra anao aho Baba”. Fihetsika nentina nilazana fa ny Fiangonana manontolo eto Madagasikara no niombom-peo sy saina nandritra ny lamesa. Tsiahivina fa nisy antokom-pihira nanomana ny saina amam-panahy talohan’ny fanombohan’ny lamesa. Ny solontenan’ny Vikaria Episkopaly Afovoany dia isan’ny nitondra fitenenana. Miala tsiny sy nanao azafady… toa manamaivana hatrany ny fifonana efa natao tany ampiandohan’ny fotoam-pivavahana izany ireny ampahan-kabary ireny. Tsara izy ireny raha soloina ka raha handroso tolo-kevitra dia hoe “Ny tsiny dia efa nohafahana nandritra ny fifonana natao teo ampiandohan’ny lamesa”… ary dia ambara avy hatrany ny anton-dresaka.
Fa raha hiverenana ny Taratasin’ny Eveka dia novelezin’ny Eveka ny fampiasana volabe eto anivon’ny fiaraha-monina indrindra tao anatin’ny fampielezan-kevitra. Nanatrika (sa nivavaka ?) tao ireo kandida roa lahy mety hifanandrina mandritra ny fihodinana faharoa. Fisehosehoana ve ? Aoka re tsy ho fahotana ny tsy fahatongavan’ny mpanao politika e !
Naneho ny heviny ny Eveka. Mbola ho maro ny fanehoan-kevitra momba iny Taratasy iny. Ny ambara dia tsy nasian’izy ireo resaka ny olana teo amin’ny fifidianana. Tsy re ihany koa ny fandrisihana ny olona hirohotra handeha hifidy amin’ny fifidianana manaraka (depiote sy fihodinana faharoa).
Mety misy ny tsy voalaza. Mavesa-danja kosa anefa ireo notanisaina ankasahiana. Hoy izy ireo : “Mahazo laka tanteraka ny fifanaratsiana sy fifanavakavaham-pihaviana sy foko ary ny fividianana ny safidim-bahoaka amin’ny fananam-bola sy harena. Nampitampim-bava ny vahoaka any ambanivohitra ny fampiderana fiara tsy mataho-dàlana sy fitaovana sarobidy isan-karazany toy elikoptera”.
Miantso ny hikatsahana ny “tena fihavanana” ireo Raiamandreny. Ho an’ny Eveka dia “lohalaharana ny fanasitranana ny ratra vokatry ny krizy”. Asa napetrany ho an’ireo kandida roa tafakatra amin’ny fihodinana faharoa.
Inefatra naverin’ny Eveka ny resaka “tena fihavanana”. Miantso ny fiarahana mihetsika ny Eveka. Hoy izy ireo : “Andeha hifanolo-tànana amin’ny fanorenana ny ampitso” fanairana fiarahana eo amin’ny fanatsarana ny fiarahamonina io. Hoy izy ireo hatrany : “hifanao soroka miara-milanja isika” eo amin’ny resaka finoana indray io. Tsy ny mahaizy ny tsirairay no tokony ho vato misakana hoy ireo Eveka. Ho an’ny Eveka dia tanjaka ny fahasamihafana fa vato manakana. Mandre izany ve ny rehetra sa hijanona ho kipantsona fotsiny izany ?